रिचार्जरले अक्सिमिटर रु. ७९९ र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर रु. ३९९९९ मै उपलब्ध गराउने Bizshala -
काठमाण्डौ । ई कमर्श प्लेटफर्म रिचार्जरले कोरोना संक्रमितको चाप बढेका बेला देखिएको अक्सिजन अभावलाई ध्यानमा राख्दै बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराउने भएको छ ।
घरायसी प्रयोजनका लागि रिचार्जरले ५ लिटर क्षमताको YU-300 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ३९ हजार ९९९ रुपैंयामा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
रिचार्जरको मोबाइल एपमा जेठ १४ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म ५ घण्टा अवधिमा आउने बुकिङ तथा अर्डरमा मात्र उल्लेखित दरमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध हुनेछ ।